Iimpazamo ezi-4 zoShishino zenza ukuba le ntlungu i-SEO yeNgingqi | Martech Zone
Utshintsho olukhulu luyaqhubeka kukhangelo lwasekhaya, kubandakanya ukubekwa kukaGoogle kweentengiso ezi-3 phezulu ukutyhala iipakethe zasekhaya kunye nesibhengezo sokuba Iipakethe zalapha ekhaya zinokubandakanya ungeniso oluhlawulelweyo kungekudala. Ukongeza, ukuboniswa kwemfono emxinwa, ukwanda kweeapps, kunye nokukhangela ngelizwi konke kunegalelo kukhuphiswano olwandayo lokubonakala, ekhomba kwikamva lokhangelo lwasekhaya apho indibaniselwano yokwahluka kunye nokuqaqamba kwentengiso kungazukubakho. Kwaye okwangoku, uninzi lwamashishini luya kubanjelwa kwelona nqanaba lisisiseko ngokungazifumani izinto ezisisiseko se-SEO yalapha.
Nazi iimpazamo ezi-4 eziqheleke kakhulu ezenziwa zii-SEO ezibonisa ubuthathaka obukhulu kwindawo enzima yokuthengisa:
1. Ukuphunyezwa ngokungachanekanga kweeNombolo zokuKhangela iiFowuni
Iinombolo zokulandelela umnxeba zazizizinto ezide kwishishini lokuthengisa lokukhangela lasekhaya ngenxa yamandla abo amakhulu okwenza idatha eyahlukeneyo, engahambelaniyo kwiwebhu kunye nefuthe elibi kwinqanaba lendawo. Nangona kunjalo, banokuphunyezwa ngononophelo ukubonelela ngedatha ebalulekileyo kumashishini. Nazi ezinye iingcebiso zokuqalisa:
Nazi ezinye iingcebiso zokuqalisa:
Enye indlela kukuhambisa inamba yakho yangoku, eyona kanye ishishini kumnikezeli wokulandela umkhondo ukuze ukwazi ukulandelela iifowuni kwinombolo yakho esele ikho. Le ndlela ikukhulula kwimfuno yokulungisa uluhlu lwakho lweshishini.
Okanye, ukuba uluhlu lwakho lweshishini sele lunamatye, aluhambelani kwaye ludinga ukucocwa, qhubeka ufumane inombolo entsha yokulandela umnxeba, kunye nekhowudi yendawo, kwaye uyisebenzise njengenombolo yakho entsha. Ngaphambi kokuba ukhethe naliphi na inani, khangela kwiwebhu ukuze uqiniseke ukuba akukabikho lwazi lukhulu lolunye ishishini elalikade lisebenzisa inombolo (awufuni ukwenza iifowuni zabo). Emva kokuba inombolo yakho entsha yokulandelela umnxeba, emva koko uqalise iphulo lakho lokucoca, usebenzisa inombolo entsha kuzo zonke izindlu zoluhlu lweshishini, iwebhusayithi yakho, kunye nalo naliphi na elinye iqonga (ngaphandle kwamaqonga entengiso ahlawulelweyo) akhankanya inkampani yakho.
Sukusebenzisa inombolo yakho ephambili yokulandela umkhondo kwiintengiso zakho zokucofa umvuzo okanye ezinye iindlela zentengiso ekwi-Intanethi. Ukwenza njalo kuya kunciphisa amandla akho okulandela umkhondo ukuba ngaba idatha isuka kwintengiso ehambelana nezinto eziphilayo. Fumana iinombolo zokulandela umkhondo ezizodwa zamaphulo akho ahlawulelweyo. Ezi azikho kwizalathiso kwiinjini yokukhangela, ngenxa yoko akufuneki zonakalise ukungaguquguquki kwedatha yeshishini lakho. * Lumka usebenzise iinombolo zokulandela umkhondo ezingafaniyo kwimikhankaso engaxhunyiwe kwi-intanethi, njengoko zinokuyenza kwiwebhu. Sebenzisa elona nani lakho liphambili ukuthengisa ngaphandle kweintanethi.
Ukulungele ukumba nzulu kukhuseleko kunye nempumelelo ngokulandelela umnxeba? Ukufundwa okucetyiswayo: Isikhokelo sokuSebenzisa ukuKhangela ukuKhangela ukuKhangela okuKhaya.
2. Ukubandakanywa kweeGeomodifiers kuMagama amaShishini aseKhaya
Enye yezona mpazamo zixhaphakileyo kumashishini eendawo ezininzi ezenziwa kwintengiso yazo yokukhangela ijikeleza kwigama eliphambili elifakela intsimi yamagama abo kushishino kuluhlu lweshishini lendawo elinamagama eendawo (isixeko, isiphaluka, okanye amagama abamelwane). Ngaphandle kokuba i-geomodifier yinxalenye yegama lakho lezomthetho okanye iDBA, Izikhokelo zikaGoogle Kwala ngokucacileyo oku, esithi:
Ukongeza ulwazi olungeyomfuneko kwigama lakho (umzekelo, "uGoogle Inc. -iNtloko yeNtloko yeNtaba yeNtaba" endaweni ye "Google") ngokubandakanya ii-tagline zentengiso, iikhowudi zevenkile, abalinganiswa abakhethekileyo, iiyure okanye imeko evaliweyo / evulekileyo, iinombolo zefowuni, ii-URL zewebhusayithi, inkonzo / ulwazi ngemveliso, indawo/ idilesi okanye izikhombisi-ndlela, okanye ulwazi lokuqulatha (umz. "Ukuleqa i-ATM eDuane Reade") akuvumelekanga.
Abanini bamashishini okanye abathengisi banokubandakanya amagama e-geo kumagama eshishini nokuba kungenxa yokuba bezama ukwahlula isebe elinye kwelinye kubathengi, okanye kuba beziva ukuba baya kuba kwinqanaba elingcono ukuba uluhlu lwabo lubandakanya le migaqo. Ukuqwalaselwa kwangaphambili, kungcono ukushiya kuGoogle ukubonisa umthengi isebe elikufutshane naye, ngoku uGoogle akwenzayo ngenqanaba elimangalisayo lokunkqonkqoza. Ukuqwalaselwa kokugqibela, kukho inyani kwinto yokuba ukuba negama lesixeko kwisihloko sakho seshishini kunokuphucula amazinga, kodwa ayikufanelanga ukwaphula umthetho kaGoogle ukuze ufumanise.
Ke, ukuba usungula ishishini elitsha kraca, unokufuna ukusebenzisa igama lesixeko njengenxalenye yegama lakho loshishino elisemthethweni, elibandakanyiweyo kwimpawu zesitalato sakho, iwebhu kunye nezinto zokuprinta, kunye nokubulisa ngomnxeba, kodwa, nakweyiphi na enye into imeko, ukubandakanywa kweegeomodifiers kwigama leshishini akuvumelekanga kuGoogle. Kwaye, kuba ufuna ukuba ezinye izindlu zoluhlu lwakho zingqamane nedatha yakho kaGoogle, kuya kufuneka ulandele lo mthetho phantse kuzo zonke ezinye izicatshulwa, udwelise nje igama lakho leshishini ngaphandle kokuguqula yonke indawo.
* Qaphela ukuba kukho into eyodwa eyahlukileyo kwezi zingasentla. I-Facebook ifuna ukusetyenziswa kwee-geomodifiers zeshishini elinendawo ezininzi. Abavumeli igama elifanayo, ekwabelwana ngalo phakathi koluhlu lweendawo zikaFacebook. Ngenxa yoku, uyakufuna ukongeza isiguquli kwindawo nganye yeFacebook yendawo yeshishini. Ngelishwa, oku kuyayenza ukungangqinelani kwedatha kodwa ungakhathazeki kakhulu malunga noku kuchaseneyo. Wonke umntu okhuphisana naye kunye neemodeli zeshishini elinendawo ezahlukileyo zikwisikhephe esinye, enika nayiphi na inzuzo yokhuphiswano / isiphoso.
3. Ukusilela ukuphuhlisa indawo yokufika kwamaphepha
Ukuba ishishini lakho linamasebe ama-2, ali-10 okanye angama-200 kwaye ubhekisa kuluhlu lweshishini lwasekhaya kunye nabathengi kwiphepha lasekhaya, uthintela amandla akho okuhambisa amava awodwa, awenzelwe wena kumaqela abasebenzisi ahlukeneyo.
Indawo yokufika kwamaphepha (aka 'amaphepha okufika asekhaya', 'amaphepha okufika esixekweni') zama ukuhambisa olona lwazi lufanelekileyo kubathengi (kunye neinjini yokukhangela) malunga nesebe elithile lenkampani. Le inokuba yindawo ekufutshane nomthengi, okanye indawo ayiphandayo ngaphambi okanye ngexesha lokuhamba.
Amaphepha okufika kwindawo kufuneka aqhagamshelwe ngqo ukuya / kuludwe lweshishini lendawo nganye, kwaye ifikeleleke ngokulula kwiwebhusayithi yenkampani ngemenyu ekumgangatho ophezulu okanye iwijethi yendawo yokugcina. Nazi izinto ezingafanelekanga nezingafanele ukwenziwa:
Qiniseka ukuba umxholo okweli phepha ngu unique. Sukutshintsha nje amagama esixeko kula maphepha kwaye uphinde upapashe umxholo kuwo. Gcina imali, ubuchule bokubhala kwiphepha ngalinye.
Qiniseka ukuba into yokuqala kwiphepha ngalinye yindawo epheleleyo yeNAP (igama, idilesi, kunye nenombolo yefowuni).
Yenza isishwankathelo seqhosha iimveliso, iimveliso kunye neenkonzo enikezelwa kwisebe ngalinye
Faka Ubungqina kunye nokunxibelelana neeprofayili zakho zokujonga kwakhona kwisebe ngalinye
Ungalibali ukufaka umkhombandlela wokuqhuba, kubandakanya ukuchonga iindwendwe eziphambili zeendwendwe ezinokubona ngokulula kufutshane neshishini
Ungalibali ithuba ukuma Kutheni ishishini lakho lolona khetho lulungileyo esixekweni ngenxa yoko kufunwa ngumsebenzisi
Ungalibali ukunika eyona ndlela yokunxibelelana neshishini emva kwexesha lomsebenzi (i-imeyile, umyalezo wefowuni, incoko ephilayo, isicatshulwaUqikelelo lokuba kuya kuthatha ixesha elingakanani ukuva impendulo
Ngaba ukulungele ukuntywila ngokunzulu kubugcisa bokwenza amaphepha okufika kwindawo entle esixekweni? Ukufundwa okucetyiswayo: Ukoyisa uloyiko lwakho lwamaphepha okufika kwindawo.
4. Ukutyeshela ukungaguquguquki
Iingcali zeshishini ziyavuma ukuba ezi zinto zintathu zenza ingozi enkulu kunayo nayiphi na enye kwishishini 'ngamathuba okonwabela amazinga aphezulu endawo:
Ukukhetha i engalunganga Udidi lweshishini xa kusenziwa uluhlu lweshishini lendawo
Benzisa i olungeyonyani Indawo yeshishini kunye nokufumana kukaGoogle oku
ukuba ukungalingani amagama, iidilesi, okanye iinombolo zefowuni (NAP) kwiwebhu
Izinto ezimbini zokuqala ezimbi kulula ukuzilawula: khetha iindidi ezichanekileyo kwaye ungaze wenze inkohliso yedatha yendawo. Okwesithathu, nangona kunjalo, yeyona inokuphuma ngaphandle komnini-shishini nokuba ayazi. Idatha engalunganga yeNAP inokuvela nakweyiphi na okanye kuzo zonke ezi zinto zilandelayo:
Iintsuku zokuqala zoPhendlo lweNgingqi xa iinjini zokukhangela zazitsala ngokuzenzekelayo idatha kwimithombo eyahlukeneyo kunye nakwimithombo yeintanethi, ekusenokwenzeka ukuba yayineempazamo
Ukuphinda kushintshwe ishishini, ukuhambisa, okanye ukutshintsha inombolo yefowuni
Ukuphunyezwa ngokungalunganga kweenombolo zokulandelela umnxeba
Ukukhankanywa okuncinci ngokusesikweni kwedatha engalunganga, njengakwizithuba zebhlog, iindaba ezikwi-Intanethi, okanye ukuphononongwa
Idatha ekwabelwana ngayo phakathi kwezintlu ezimbini ezibangela ukudideka okanye uluhlu oluhlanganisiweyo
Idatha engahambelaniyo kwiwebhusayithi yenkampani uqobo
Ngenxa yendlela idatha yeshishini lendawo ehamba ngayo kuyo yonke ukukhangela kwendalo, idatha ezimbi kwiqonga elinye zinokuhla ziye kwabanye. Ngenxa yokuba i-NAP embi ikholelwa ekubeni inefuthe lesithathu elibi kakhulu kwizinga lokukhangelwa kwendawo, kubaluleke kakhulu ukuyifumana kwaye uyihlanze. Le nkqubo ibizwa ngokuba 'kukuphicothwa'.
Ukuphicotha uphicotho ngokubanzi kuqala ngokudityaniswa kophendlo lwencwadana lwezinto ezahlukeneyo zeNAP, kunye nokusetyenziswa kwezixhobo zasimahla ezinje Uluhlu loLuhlu lweMoz, ekuvumela ukuba uvavanye kwangoko impilo yeNAP yakho kwamanye amaqonga abaluleke kakhulu. Nje ukuba i-NAP embi ifunyenwe, ishishini linokusebenza ngesandla ukuyilungisa, okanye, ukonga ixesha, lisebenzisa inkonzo ehlawulelweyo. Ezinye iinkonzo ezithandwayo eMntla Melika zibandakanya Indawo yaseMoz, Ipaki emhlophe, yaye Yext. Injongo ephambili yophicotho-zincwadi kukuqinisekisa ukuba igama lakho, idilesi, kunye nenombolo yefowuni zihambelana ngokusemandleni, kwiindawo ezininzi ngangokunokwenzeka, kwiwebhu.
Amanyathelo alandelayo e-SEO yendawo
Kule minyaka izayo, ishishini lakho lasekuhlaleni liza kubandakanyeka kwiindlela ezahlukeneyo zokuthengisa ukuze uhambisane nendlela i-Intanethi kunye nokuziphatha komntu okuguqukayo, kodwa konke oku kufuneka kwakhiwe kwisiseko seziseko ezisisiseko. Ukungaguquguquki kwe-NAP, ukuthotyelwa kwesikhokelo, kunye nokuphuhliswa komxholo okuhambelana nengqiqo, ezona ndlela zilungileyo ziya kuqhubeka kufanelekile kuwo onke amashishini alapha kwikamva elibonakalayo, kusenziwa iphedi yokuvula isiseko apho konke kusekelwa kuko konke ukukhangelwa kwetekhnoloji yokuphanda yasekhaya. Ngaba ufuna ukubona ukuba ishishini lakho livela njani kwiwebhu?
Ngaba ufuna ukubona ukuba ishishini lakho livela njani kwiwebhu?
Fumana iNgxelo yoLuhlu lwaseMoz simahla
tags: idilesiukulandelela umnxebatsalela umnxeba iinombolo zokulandela umkhondoIndawo ye-facebookii-geomodifiersiimaphu zikagoogleUGoogle + Wengingqiukukhangela kwendawoyendawo seoinkwenkwemoz yendawoigamaI-NAPinombolo yomnxebaSEO
Uhlalutyo lukaGoogle luSungula iStudiyo seDatha (iBeta)